ဗိုက်ခေါက်အဆီချများလို့ အဆီချချင်သူ့များကို ဘာတွေလုပ်ဆောင်သင့်လဲဆိုတာကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်…. - ZeeKwat
Home » Gallery » Health » ဗိုက်ခေါက်အဆီချများလို့ အဆီချချင်သူ့များကို ဘာတွေလုပ်ဆောင်သင့်လဲဆိုတာကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်….
ဗိုက်ခေါက်အဆီချများလို့ အဆီချချင်သူ့များကို ဘာတွေလုပ်ဆောင်သင့်လဲဆိုတာကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်….
<<< Zawgyi ဖြင့်ဖတ်ရန် >>>
အလွယ်ဆုံး ဗိုက်ခေါက်အဆီချနည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းက မလိုအပ်တဲ့ အဆီပိုဖယ်ရှားတဲ့နည်း( detox)လည်း ဖြစ်တယ်။ detox လုပ်ဖို့ ရေနွေးနဲ့ ရှောက်သီးတလုံးပဲလိုပါတယ်။တကယ်တော့ ဝမ်းတွင်း၊အူထဲမှာ အဆိပ်အတောက်၊အဆီခဲလေးတွေ ပုံမှန်အားဖြင့် ရှိနေတတ်တယ်။ အဲဒါလေးတွေက ဘာမှမဟုတ်ပေမယ့် လူကိုဒုက္ခပေးတတ်တယ်။ အထူးသဖြင့် ရေခဲရေအမြဲသောက်သူတွေမှာ ပိုတွေ့ရတယ်။ အဆီလေးတွေခဲပြီး အူလမ်းကိုပိတ်ရင် အာဟာရ စုပ်ယူမှုကို တားဆီပါသတဲ့။အဲလိုမဖြစ်အောင် အူလမ်းကြောင်းမှာရှိတဲ့ အဆိပ်အတောက်၊အဆီခဲတွေကို ဖယ်ရှားပေးရတယ်။
လေ့လာမှုတွေအရ မနက်အိပ်ရာထမှာ ရိုးရိုးရေနွေး(လက်ဖက်ခြောက်မပါ) သောက်ခြင်းက ကျန်းမာရေးအတွက် အထူးကောင်းမွန်တာ တွေ့ရတယ်။အစာအိမ်ကို စတင်နှိုးဆွပေးပြီး အူလမ်းကြောင်းကို အသက်ဝင်စေတယ်။ တနေ့တာအစာခြေဖို့အတွက် အခြေခံကောင်းတခုဖြစ်တယ်လို့ ယူဆကြတယ်။အူလှုပ်ရှားမှုကို ဖြစ်စေပြီး အစာချေစနစ်ကို အားပေးလို့ ဝမ်းချုပ်ခြင်းကို ကာကွယ်ပြီး ဖြစ်တယ်။ တချို့ကလည်း အာနိသင်ပိုကောင်းအောင် ပိုလီဖီနော(polyphenol)ကြွယ်ဝတဲ့ ရှောက်သီးကို မနက်စောစော အိပ်ရာထမှာ ရေနွေးထဲစိမ်ပြီး သောက်ကြတယ်။ ရှောက်သီးရဲ့ အာနိသင်ကြောင့် အနံ့၊အရသာကောင်းမွန်တဲ့ ရေနွေးကို ဖြစ်ပေါ်စေတယ်။ ပိုကောင်းတာက ရှောက်သီးမှာပါဝင်တဲ့ ပက်တင်(pectin)အမျှင်ဓာတ်က ဝမ်းမှန်စေတယ်။ အူလမ်းကြောင်းမှာရှိတဲ့ အစာဟောင်းတွေကို စွန့်ထုတ်ပေးတယ်။ အဆီပိုတွေကိုလည်း ကျဆင်းစေတယ်။
တချို့ကလည်း ရှောက်သီးနေရာမှာ သံပုရာသီးကို သုံးတယ်။ အလျဉ်းသင့်လို့ ဖော်ပြရရင် သံပုရာသီးနဲ့ ရှောက်သီးမှာ ကွာခြားချက်လေးတွေ ရှိတယ်။ ပုံစံကို ကြည့်ရင် ယေဘုယျခွဲနိုင်တယ်။ သံပုရာက အလုံးသေးပြီး ဝိုင်းတယ်။ အရောင်က အစိမ်းရောင် ရှိတယ်။ ရှောက်သီးကတော့ ဘဲဥပုံဖြစ်ပြီး အဝါရောင် ဖြစ်တယ်။ ဒီထဲမှာ သံပုရာသီးက ပိုချဉ်ပြီး အက်ဆစ်ဓာတ်ကဲတယ်။ ရှောက်သီးကတော့ နည်းနည်းပိုခါးတယ်။ ဒါပေမယ့် ရင့်မှည့်လာရင် ပိုဝါပြီး ချိုလာတယ်။ ရေထဲကို စိမ်ကြည့်ရင် သိပ်သည်းဆပိုများတဲ့ သံပုရာသီးက အောက်ကို နှစ်မြှုပ်သွားမယ်။သိပ်သည်းဆသိပ်မများတဲ့ ရှောက်သီးကတော့ ရေပေါ်မှာ ပေါ်လောပေါ်နေတာ တွေ့ရတယ်။ ဒါက သံပုရာသီးလား၊ရှောက်သီးလား အလွယ်ကူဆုံး ခွဲခြားတဲ့နည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ရေနွေးသောက်တဲ့အခါ ရှောက်သီး(သို့)သံပုရာသီး တညလုံးစိမ်ထားပြီးသား ရေနွေးထက် လောလောလတ်လတ်စိမ်ထားတဲ့ ရေနွေးခပ်ပူပူကို ပိုသောက်သင့်တယ်။ သောက်တဲ့အခါ အငွေ့တထောင်းထောင်းထနေတဲ့ ရေနွေးထက် အသင့်အတင့်ပူတဲ့ ရေနွေးမျိုးက ပါးစပ်၊အစာမျိုပြွန်နဲ့ အစာအိမ်လမ်းကြောင်း ထိခိုက်မှုကို ကာကွယ်ရာရောက်တယ်။
ဒီနည်းက ပုံမှန်အားဖြင့် လူတိုင်းနဲ့ သင့်တော်ပါတယ်။ အမေးများတဲ့မေးခွန်းတခုရှိတယ်။ သံပုရာသီးက အစာအိမ်သမားနဲ့ သင့်တော်ပါ့မလားတဲ့။ ပုံမှန်အားဖြင့် သင့်တော်တယ်လို့ ဖြေပါရစေ။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ ရှောက်သီးသဘောက အက်ဆစ်ဓာတ်ကဲပေမယ့် ခန္ဓာကိုယ်ထဲရောက်သွားရင် အယ်လ်ကာလီပြောင်းသွားလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အစာအိမ်နာဖြစ်နေစဉ်၊ ဗိုက်နာနေစဉ် လုံးဝမသောက်သင့်ပါ။ ပိုဆိုးလာနိုင်တယ်။ တချို့ အူပါးမှာ စိုးရိမ်သူတွေလည်း ရှိတယ်။ အဲလောက်ကြီး မဆိုးရိမ်ပါနဲ့။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ နှစ်ချီဆွဲသောက်ဖို့ မလိုအပ်လို့ပါ။ နှစ်ပတ်ခန့် သောက်သုံးတာနဲ့ အသားရေကြည်လင်လာပြီး တလခန့်အကြာမှာ အဆီပိုတွေ ကင်းစင်လာလိမ့်မယ်။
အရင်ဆုံးရှောက်သီးတလုံးကိုယူပြီး ခလယ်က ထက်ခြမ်းခြမ်းပါ။ တချို့က ပါးပါးလေးလှီးတယ်။ ပြီးရင် ရေနွေးပွက်ပွက်ဆူထဲထည့်ပြီး မိနစ်(၂၀ ) ခန့် နှပ်ထားပါ။ပြီးရင် ကြက်သွန်ဖြူ(၃)စိတ်ကို အစိမ်းလိုက် ဝါးစားပါ။ စောစောက နှပ်ထားတဲ့ ရှောက်သီးခြမ်းရေနွေးဆက်သောက်ပါ။ ရှောက်သီးနေရာမှာ သံပုရာသီးသုံးနိုင်တယ်။ မနက်စောစောအိပ်ရာထ ဘာဆိုဘာမှမစားခငိသောက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တနည်းက သံပုရာတခြမ်း၊ သခွားသီးစိတ်(၅)စိတ်၊ ဂျင်းတက်သေးတခု၊ ပူစီနံ နဲနဲကို ရေနွေးပွက်ပွက်ဆူ(300ml)ထဲ ရောသမပြီး နှပ်ထားပါ၊ မိနစ်(၂၀)နေရင် စတင်သောက်သုံးပါ။ တလအတွင်း ဗိုက်ခေါက် အဆီပိုတွေကို ဖယ်ရှာနိုင်ပါတယ်။
အလှယဆြုံး ဗိုကခြေါကအြဆီခနွညြးဖှစပြါတယြ။ ဒီနညြးက မလိုအပတြဲ့ အဆီပိုဖယရြှားတဲ့နညြး( detox)လညြး ဖှစတြယြ။ detox လုပဖြို့ ရနှေေးနဲ့ ရှောကသြီးတလုံးပဲလိုပါတယြ။တကယတြော့ ဝမြးတှငြး၊အူထဲမှာ အဆိပအြတောကြ၊အဆီခဲလေးတှေ ပုံမှနအြားဖှငြ့ ရှိနတတေတြယြ။ အဲဒါလေးတှကေ ဘာမှမဟုတပြမယြေ့ လူကိုဒုကျခပေးတတတြယြ။ အထူးသဖှငြ့ ရခေဲရအမှေဲသောကသြူတှမှော ပိုတှရေ့တယြ။ အဆီလေးတှခေဲပှီး အူလမြးကိုပိတရြငြ အာဟာရ စုပယြူမှုကို တားဆီပါသတဲ့။အဲလိုမဖှစအြောငြ အူလမြးကှောငြးမှာရှိတဲ့ အဆိပအြတောကြ၊အဆီခဲတှကေို ဖယရြှားပေးရတယြ။
လလေ့ာမှုတှအရေ မနကအြိပရြာထမှာ ရိုးရိုးရနှေေး(လကဖြကခြှောကမြပါ) သောကခြှငြးက ကနြွးမာရေးအတှကြ အထူးကောငြးမှနတြာ တှရေ့တယြ။အစာအိမကြို စတငနြှိုးဆှပေးပှီး အူလမြးကှောငြးကို အသကဝြငစြတယြေ။ တနတေ့ာအစာခှဖေို့အတှကြ အခှခေံကောငြးတခုဖှစတြယလြို့ ယူဆကှတယြ။အူလှုပရြှားမှုကို ဖှစစြပှေီး အစာခွစနေစကြို အားပေးလို့ ဝမြးခွုပခြှငြးကို ကာကှယပြှီး ဖှစတြယြ။ တခွို့ကလညြး အာနိသငပြိုကောငြးအောငြ ပိုလီဖီနော(polyphenol)ကှယဝြတဲ့ ရှောကသြီးကို မနကစြောစော အိပရြာထမှာ ရနှေေးထဲစိမပြှီး သောကကြှတယြ။ ရှောကသြီးရဲ့ အာနိသငကြှောငြ့ အနံ့၊အရသာကောငြးမှနတြဲ့ ရနှေေးကို ဖှစပြေါစြတယြေ။ ပိုကောငြးတာက ရှောကသြီးမှာပါဝငတြဲ့ ပကတြငြ(pectin)အမွှငဓြာတကြ ဝမြးမှနစြတယြေ။ အူလမြးကှောငြးမှာရှိတဲ့ အစာဟောငြးတှကေို စှနြ့ထုတပြေးတယြ။ အဆီပိုတှကေိုလညြး ကဆွငြးစတယြေ။
တခွို့ကလညြး ရှောကသြီးနရောမှာ သံပုရာသီးကို သုံးတယြ။ အလဉြွးသငြ့လို့ ဖောပြှရရငြ သံပုရာသီးနဲ့ ရှောကသြီးမှာ ကှာခှားခကွလြေးတှေ ရှိတယြ။ ပုံစံကို ကှညြ့ရငြ ယဘေုယခွှဲနိုငတြယြ။ သံပုရာက အလုံးသေးပှီး ဝိုငြးတယြ။ အရောငကြ အစိမြးရောငြ ရှိတယြ။ ရှောကသြီးကတော့ ဘဲဥပုံဖှစပြှီး အဝါရောငြ ဖှစတြယြ။ ဒီထဲမှာ သံပုရာသီးက ပိုခဉွပြှီး အကဆြစဓြာတကြဲတယြ။ ရှောကသြီးကတော့ နညြးနညြးပိုခါးတယြ။ ဒါပမယြေ့ ရငြ့မှညြ့လာရငြ ပိုဝါပှီး ခွိုလာတယြ။ ရထေဲကို စိမကြှညြ့ရငြ သိပသြညြးဆပိုမွားတဲ့ သံပုရာသီးက အောကကြို နှစမြှုပသြှားမယြ။သိပသြညြးဆသိပမြမွားတဲ့ ရှောကသြီးကတော့ ရပေေါမြှာ ပေါလြောပေါနြတော တှရေ့တယြ။ ဒါက သံပုရာသီးလား၊ရှောကသြီးလား အလှယကြူဆုံး ခှဲခှားတဲ့နညြး ဖှစပြါတယြ။ ရနှေေးသောကတြဲ့အခါ ရှောကသြီး(သို့)သံပုရာသီး တညလုံးစိမထြားပှီးသား ရနှေေးထကြ လောလောလတလြတစြိမထြားတဲ့ ရနှေေးခပပြူပူကို ပိုသောကသြငြ့တယြ။ သောကတြဲ့အခါ အငှတေ့ထောငြးထောငြးထနတေဲ့ ရနှေေးထကြ အသငြ့အတငြ့ပူတဲ့ ရနှေေးမွိုးက ပါးစပြ၊အစာမွိုပှနနြဲ့ အစာအိမလြမြးကှောငြး ထိခိုကမြှုကို ကာကှယရြာရောကတြယြ။
ဒီနညြးက ပုံမှနအြားဖှငြ့ လူတိုငြးနဲ့ သငြ့တောပြါတယြ။ အမေးမွားတဲ့မေးခှနြးတခုရှိတယြ။ သံပုရာသီးက အစာအိမသြမားနဲ့ သငြ့တောပြါ့မလားတဲ့။ ပုံမှနအြားဖှငြ့ သငြ့တောတြယလြို့ ဖှပေါရစေ။ ဘာ့ကှောငြ့လဲဆိုတော့ ရှောကသြီးသဘောက အကဆြစဓြာတကြဲပမယြေ့ ခနျဓာကိုယထြဲရောကသြှားရငြ အယလြကြာလီပှောငြးသှားလို့ ဖှစပြါတယြ။ ဒါပမယြေ့ အစာအိမနြာဖှစနြစဉြေ၊ ဗိုကနြာနစဉြေ လုံးဝမသောကသြငြ့ပါ။ ပိုဆိုးလာနိုငတြယြ။ တခွို့ အူပါးမှာ စိုးရိမသြူတှလညြေး ရှိတယြ။ အဲလောကကြှီး မဆိုးရိမပြါနဲ့။ ဘာ့ကှောငြ့လဲဆိုတော့ နှစခြွီဆှဲသောကဖြို့ မလိုအပလြို့ပါ။ နှစပြတခြနြ့ သောကသြုံးတာနဲ့ အသားရကှညေလြငလြာပှီး တလခနြ့အကှာမှာ အဆီပိုတှေ ကငြးစငလြာလိမြ့မယြ။
အရငဆြုံးရှောကသြီးတလုံးကိုယူပှီး ခလယကြ ထကခြှမြးခှမြးပါ။ တခွို့က ပါးပါးလေးလှီးတယြ။ ပှီးရငြ ရနှေေးပှကပြှကဆြူထဲထညြ့ပှီး မိနစြ(၂၀ ) ခနြ့ နှပထြားပါ။ပှီးရငြ ကှကသြှနဖြှူ(၃)စိတကြို အစိမြးလိုကြ ဝါးစားပါ။ စောစောက နှပထြားတဲ့ ရှောကသြီးခှမြးရနှေေးဆကသြောကပြါ။ ရှောကသြီးနရောမှာ သံပုရာသီးသုံးနိုငတြယြ။ မနကစြောစောအိပရြာထ ဘာဆိုဘာမှမစားခငိသောကရြမှာ ဖှစပြါတယြ။
နောကတြနညြးက သံပုရာတခှမြး၊ သခှားသီးစိတြ(၅)စိတြ၊ ဂငြွးတကသြေးတခု၊ ပူစီနံ နဲနဲကို ရနှေေးပှကပြှကဆြူ(300ml)ထဲ ရောသမပှီး နှပထြားပါ၊ မိနစြ(၂၀)နရငြေ စတငသြောကသြုံးပါ။ တလအတှငြး ဗိုကခြေါကြ အဆီပိုတှကေို ဖယရြှာနိုငပြါတယြ။
Ref : Dietplan